फिफा वर्ष खेलाडीमा १० मनोनित, को-को परे सूचीमा ? - Deshko News Deshko News फिफा वर्ष खेलाडीमा १० मनोनित, को-को परे सूचीमा ? - Deshko News
फिफा वर्ष खेलाडीमा १० मनोनित, को-को परे सूचीमा ?
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय ९फिफा० ले फिफा वर्ष खेलाडीका लागि १० जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्षको जुलाई ३ ९२०१७० बाट यो वर्षको जुलाई १५ सम्म खेलाडीले क्लब र राष्ट्रको लागि खेल्दा गरेको प्रदर्शनको आधारमा २५ खेलाडी मनोनयन गरेको फिफाले जनाएको छ ।
फिफाले विश्वभरका राष्ट्रिय टिमका कप्तान र प्रशिक्षक तथा छानिएका खेल पत्रकार र फुटबल समर्थकको मतको आधारमा वर्ष खेलाडी चयन गर्ने गर्दछ । रासस